ओठ का’लो भएर है’रान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस- – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकओठ का’लो भएर है’रान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुहोस-
काठमाडौं- हाम्रो शररिको म’हत्वपुर्ण अंग भनेको ओठ हो । ओठ राम्रो भयो भने हरेक मानिस सुन्दर देखिन्छ । उमेर ले वा अन्य वि’भिद कारणले गर्दा ओठको रँ’ग ब’दलिने हुन्छ ।अनियमित खानपानले धु’म्रपानको अ’सरले गर्दा पनि यसको रङ ब’दलिने गर्दछ । प्रत्येक मानिसहरुले आफनो ओठ सुन्दर राख्न प्रा’क्रतिक रङ फर्काउन विभिन्न क’स्मेटिक सामग्री प्रयोग गर्छन् । तर, केही त्यस्ता उ’पाय पनि छन्, जसले तपाईंको प्राकृतिक च’मकलाई ओठमा फ’र्काउन सक्छ ।
ओठ कालो हुने कारण हरेक छन । क’फीको अत्यधिक से’वनले स’मस्या नि’म्याउन सक्छ । राति सुत्नुअघि मे’कअप ह’टाउने गर्नुहुन्न भने पनि यसले तपाईंको ओठको रङ ब’दलेको हुन सक्छ ।प्रदूषण तथा घामको वि’किरणका कारण पनि ओठ कालो हुन सक्छ । सुत्नु अघि का’गतीलाई नि’चोरेर ओठमा लगाउनुपर्छ । एक दुई महिना सम्म यो नि’यमित गर्नुपर्छ ।यसले तपाईंको ओठको पुरा’ना काम न’लाग्ने को’षलाई ता’जा र च’म्किलो ब’नाइदिन्छ ।
कालो ओठलाई गु’लाबी बनाउन चु’कन्दर पनि सहयोगी हुन्छ । सुत्नुअघि चु’कन्दर लगाउने र बिहान सफा गर्नुपर्छ । चु’कन्दरको रातो रङले ओठलाई गु’लाबी बनाइदिन्छ । ओठमा घि’उकुमारीको प्रयोग गर्दा पनि च’मक बिस्तारै फ’र्कन सक्छ । त्यसैले यिनि बि’धि प्रयोग गर्दा ओठ लाई मु’लायन र सुन्दर गराउन मद्धत गर्छ ।
श्रीमान श्रीमतीबीच म’नमुटाब भइरहन्छ भने बे’डरुममा यी कुराहरु नराखेकै राम्रो ?